06/23/13 ~ Myanmar Forward
Dolphin Browser 10.0.0 For Android
Posted by drmyochit Sunday, June 23, 2013, under နည်းပညာ | No comments
အင်တာနက် သုံးရာမှာ မြန်ဆန်လျှင်မြန်တဲ့ Dolphin Web Brower ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ။
သူမှာပါဝင်တဲ့ Add on တွေကတော့
ကွန်နက်ရှင် နှေးနေတဲ့အချိန်မှာတောင် Web Page တွေကို လျှင်မြန်စွာ ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမဂ္ဂဇင်းအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ကန့်ကွက်
Posted by drmyochit Sunday, June 23, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမဂ္ဂဇင်း Vol 182, No. 1 တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓ၏သားတော် သံဃာတစ်ပါးဖြစ်သူ ဦးဝီရသူအား မျက်နှာဖုံးတင်၍ "THE FACE OF BUDDHIST TERROR" ဆောင်းပါးအား ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘာသာရေးခွဲခြားမှု မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ပြုထားသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံသား အများစုက ယုံကြည်လေးမြတ်စွာ ကိုးကွယ်ကြသော်လည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၆၂ တွင် “နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန် ဘာသာ သာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ သာသနာ နှင့် နတ်ကိုးကွယ်သော ဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများ ဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်” ဟူ၍ ပြဌာန်းထားသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာသည် ကံ ကံ၏ အကျိုးကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်၍ ရရှိသည့် အသိအမြင်ကို အခြေခံ၍ လည်းကောင်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ပေးထားသည့် မြင့်မြတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုသည့် ဘာသာတရား ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သားတော်များ ဖြစ်သည့် သံဃာတော် များသည်လည်း (၂၂၇) သွယ်သော သိက္ခာပုဒ်တို့ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်း ကြရပြီး သာသနာတော် သန့်ရှင်း၊ တည်တံ့၊ ပြန့်ပွားရေးအတွက် နှစ်ပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ် ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် “၉၆၉” အမှတ်တံဆိပ်သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တော် (၉) ပါး၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ ဂုဏ်တော် (၆) ပါးနှင့် သံဃာတော် တို့၏ ဂုဏ်တော် (၉) ပါးကို ကိုယ်စားပြုသော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည့် ရတနာသုံးပါးကို ရည်ညွှန်းသည့် သင်္ကေတ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး သင်္ကေတဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို ညိုးနွမ်းစေနိုင် မည့် နေရာဌာနနှင့် ကိစ္စများတွင် အသုံးမပြုရန် သက်ဆိုင်ရာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများက အလေးထား မေတ္တာရပ်ခံလျက် ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းစ မြန်မာ့ လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိစေရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူများ ပူးပေါင်း၍ ကြိုးပမ်း တည်ဆောက်နေသောအချိန် ဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည် သိမ်မွေ့နက်နဲသော အကြောင်းခြင်းရာများ ဖြစ်၍ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ဘာသာသာသနာများအကြား အပြန်အလှန် လေးစားယုံကြည်မှုတို့နှင့်အတူ အထူး အလေးထား ဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းပါ ဖော်ပြချက်သည် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ၍ တည်တံ့လာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေပြီး လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဘာသာပေါင်းစုံတို့အကြား အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေခြင်း ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
သို့ဖြစ်၍ THE FACE OF BUDDHIST TERROR ဆောင်းပါး ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမဂ္ဂဇင်း Vol 182, No. 1 အား ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီတစ်သက် ဘယ်တော့မှ မလေးကို ပြန်မသွားတော့ဘူးဟု မလေးမှ ပြန်ရောက်လာသူ ဆို
Posted by drmyochit Sunday, June 23, 2013, under သတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၃။
“ဒီတစ်သက် ဘယ်တော့မှ မလေးကို ပြန်မသွားတော့ဘူး။ ကျွန်တော့ရှေ့မှာ မလေး သွားမယ့်သူတွေ ရှိရင်လည်း ရအောင် တားသွားမယ်”ဟု ယမန်နေ့က မလေးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့သူ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့ ကျောက်ရန်သာစည်ရွာမှ ကိုဝေအောင်သိန်းက ပြောကြားသည်။
၎င်းသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခန့်မှစ၍ မလေးရှားသို့ အောက်လမ်းမှ အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ ရက်က ညဘက် အဆောင်၌ အိပ်နေစဉ် အကြမ်းဖက်သမားများ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ယင်းနောက် လည်ပင်းကို ကြိုးနဲ့ဆွဲကာ ခေါင်းကို ဓါးညှောင့်ဖြင့် အထုခံခဲ့ရပြီး လက်ကို ဓါးဖြင့် အခုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်သမားများလက်မှ ထွက်ပြေးပြီးနောက်ပိုင်း ရေနုတ်မြောင်းထဲသို့ ဝင်ပုန်းရင်း သတိလစ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံက အဆောင်မှာ မြန်မာလုပ်သား အားလုံး ၆ ယောက်ရှိတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့ညက ကျွန်တော်တို့ တအားအော်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘေးဆောင်မှာ ဘင်္ဂါလားက အလုပ်သမား ၁၈ ယောက် နေတယ်။ တစ်ယောက်မှ မနိုးကြဘူး။ အကြမ်းဖက်သူတွေထဲမှာ စက်ရုံထဲကလည်း ပါမယ်ထင်တယ်”ဟု ယင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ယင်းမြန်မာအလုပ်သမား ၆ ဦးသည် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာမြို့ ဆူပန်ပါဆာ ဝါယာစက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကြသူများ ဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်သည့်ညတွင် ဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်သူ စုစုပေါင်း ၆ ဦးဖြစ်ပြီး မျက်နှာဖုံးများ စွတ်၍ ဓါးတစ်လက်စီ ကိုင်ထားကာ မီးသတ်ဆေးဘူးများလည်း ပါကြောင်း ယင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် လက်တွင် ဓါးဒဏ်ရာ ၂ ချက် ရရှိခဲ့သူ ကိုခင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာချိန်ထိ မလေးမှာ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ နေ့တိုင်း မသေတဲ့သူ မရှိသလောက်ပဲ။ မလေးရဲတွေကလည်း ကုလားဆိုရင် မဖမ်းဘူး။ ဗမာပြည်က သူတွေဆိုရင် ပတ်စပို့ ရှိရှိ၊ မရှိရှိ ဖမ်းတယ်။ ပတ်စပို့ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ပြန်ပို့ပေးတယ်”ဟု ကိုဝေအောင်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ယခုလက်ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာချင်သည့် မြန်မာလုပ်သားများ အနေဖြင့် လက်ထဲတွင် ပိုက်ဆံမရှိခြင်း၊ ပတ်စပို့မရှိသည့်အတွက် အပြင်သွားရန် ခက်ခဲခြင်းတို့ကို အဓိက ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
“ခုဆိုရင် မလေးက ဗမာတွေက သံရုံးကိုတောင် ကားနဲ့ မသွားရဲကြဘူး။ ကုလားတွေက လမ်းမှာ ရဲဟန်ဆောင်ပြီး ဖမ်းတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့လည်း အပြင်မသွားဝံ့ကြတာတွေ ရှိတယ်” ဟု ယင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အကြမ်းဖက်ခံရသည့် မြန်မာလုပ်သား ၆ ဦးတွင် ပတ်စပို့ မရှိဘဲ မလေးသို့ အောက်လမ်းမှ ထွက်သွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး တချို့မှာ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်သည်မှာ ၂ လပင် မပြည့်သေးကြောင်း၊ ယခု ပဋိပက္ခများကြောင့် မလေးမှ ပြန်လာခဲ့ကြသော်လည်း ထွက်သွားစဉ်က အကြွေးများပင် မကျေသေးကြောင်း သိရသည်။
“ပြဿနာတွေ အများစုက ဆာလာရမ်းမှာ အဓိက ဖြစ်တယ်။ ခုအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ သိသလောက် အဲလောက် ပြဿနာမကြီးဘူး။ မလေးရှားမှာ အဓိက ဖြစ်နေတာက over stay ပြဿနာပဲ။ ဒဏ်ရာရတဲ့သူလည်း ရှိသလို သေတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီ over stay သမားတွေကို အတက်နိုင်ဆုံး ဒီကို ပြန်ပို့ပေးဖို့ ကြိုးစားသွားမယ်” ဟု ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ Public Relation Director ဖြစ်သူ ကိုရဲမျိုးဟိန်းက ပြောကြားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုမှာ အလုပ်သမား ပြဿနာဖြစ်ပြီး ယင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်မှာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှသာ ပြေလည်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“မလေးမှာ အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ရတာ နေရာသာ မတူတာ။ ပိုက်ဆံရတာချင်းကျတော့ တူတူလောက်ပါပဲ။ ဒီလိုတွေ မဖြစ်လဲ ကျွန်တော်က ၁၀ လပိုင်းလောက် ပြန်ဖို့ စဉ်းစားထားပြီးသားပါ။ ခု မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်မှပဲ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်တယ်။ ဟိုမှာ နေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ တစ်ရက်မှ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး”ဟု ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကျောက်ရန် သာစည်ရွာမှ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အောက်လမ်းမှ သွားမည်ဆိုပါက အချိန် ၂ ပတ်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားသည့် ဆာလာရမ်းနှင့် ကွာလာမြို့မှာ ကားနှင့်သွားမည် ဆိုပါက ၂ နာရီခန့်သာ ကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by drmyochit Sunday, June 23, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
စမုန်စပါးစေ့ဟာလည်း ပျို့အန်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ စမုန်စပါးစေ့ကို ရေနွေးနဲ့ ဖျော်သောက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပလတ်စတစ် အိတ်ထဲထည့်ပြီး သွားလေရာတစ်ပါတည်း ယူသွားကာ မကြာခဏ ဝါးစားပေးပါ။ စမုန်စပါးစေ့ဟာ ကလေးနို့တိုက် မိခင်တွေ အတွက်လည်း နို့ထွက်အား ကောင်းစေပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အရမ်းကို ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါ တိုင်းဟာ ဆိုးဝါး လှသလို ရင်သား ကင်ဆာ ဆိုတာ ကလည်း ထိုနည်းတူ ပါပဲ။ စောစီးစွာ သိရှိပြီး မပျံ့နှံ့သေးဘူး ဆိုရင် ခွဲစိတ် ကုသလို့ ရတယ် ဆိုပေမယ့် ခံစားရသူ အမျိုးသမီးမှာ ရင်သား တစ်ဖက် ကံဆိုးရင် နှစ်ဖက်လုံး ထုတ်လိုက် ရတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အရမ်း ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေသလို ခွဲစိတ်မှု နောက်ကနေ လိုက်သွင်းရတဲ့ ကင်ဆာ ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေကလည်း ကြောက်ခမန်း လိလိပါပဲ။
ဒါတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ရင်သား ကင်ဆာကို ကြိုတင် ကာကွယ် နိုင်တဲ့ သိပ္ပံ နည်းကျ နေထိုင် စားသောက်ပုံ နည်းလမ်း (Lifestyle) များကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
TIME မဂ္ဂဇင်း၊ မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် ဘာသာရေး
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည့် TIME မဂ္ဂဇင်းတွင် Hannah Beech ရေးသားသော "ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဆိုးသွမ်းနေသောအခါ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားချက်များသည် ဦးဝီရသူကို ဆိုလိုခြင်းထက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ငြိမ်းချမ်းသော ဘာသာတရားအဖြစ်မှ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်များနှင့် တန်းတူထားကာ အစွန်းရောက် ဘာသာတစ်ခုအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်စဉ်များကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ခြင်း မရှိသည့် ဘင်္ဂါလီများ စိမ့်ဝင်မှုနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိမ့်ကျအောင် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘာသာတရား တစ်ခုကို နိမ့်ကျအောင် ချိုးနှိမ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အစ္စလမ်ဘာသာ၌ သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြုလုပ်လေ့ ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချိုးနှိမ်ရေးသားမှုများ အတွက်ကိုမူ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မည်မျှသိမ်မွေ့၊ ငြိမ်းအေးသော ဘာသာတရားဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ပြသရမည် ဖြစ်သည်။ TIME မဂ္ဂဇင်းကဲ့သို့ သြဇာတိက္က မရှိသော မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်အနေဖြင့်လည်း ဘာသာတရား တစ်ခုအား ယခုကဲ့သို့ ချိုးနှိမ်ရေးသားခြင်းမျိုး ပါဝင်သည့်အတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့် လျော်ညီခြင်း ရှိမရှိ မေးခွန်းထုတ် ဆန်းစစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ များမကြာမီ ကာလက TIME မဂ္ဂဇင်းနှင့် အလားတူ သြဇာကြီးမားသော မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်သည့် NewsWeek မဂ္ဂဇင်းသည် ရပ်တည်ရန် ငွေကြေးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ TIME မဂ္ဂဇင်း၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှိမ်ချရေးသားမှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သည့်အကြောင်း တရားများနှင့် ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာ ရှိနေသည်ကလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသည်။
ယခုဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သူ Hannah Beech သည် မကြာသေးမီက သမ္မတ အပါအ၀င် မြန်မာအစိုးရ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူ အချို့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရဖူးသူလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းယခု ရေးသားခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘာသာရေး ပဋိပက္ခအသွင် ပြဿနာရပ်များမှာ နောက်ကွယ်တွင် မည်သည့်အကြောင်းတရားများကြောင့် ဆိုသည်ကို ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ လက်ညှိုးထိုးခဲ့ကာ သေးသိမ်အောင် ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်များအကြား ဘာသာရေး မတူညီမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲအဖြစ် ရေးသားထားသလို ဘင်္ဂါလီ ပြဿနာသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့အကြား ဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခအဖြစ် ရေးသားထားသည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက မျှတမှု မရှိခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် မညီခြင်းများ ရှိနေရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ အများပြည်သူအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့ကာ တောရောမြို့ပါ ကြေကွဲစရာ၊ ပေါက်ကွဲစရာများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော ငြိမ်းအေးခြင်းကို မမေ့မလျော့ဘဲ ဥပဒေဘောင် အတွင်းကသာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တုံ့ပြန်သင့်ပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားမှ အစ္စလာမ်စစ်စစ်သွေးကြွ များစိမ့်ဝင်ပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တော့မည်
လူမှူရေး ဆိုရှယ် ဝပ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သော တွစ်တာ တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လေ့ကျင့်ပြီးခဲ့သော အစ္စလာမစ် စစ်သွေးကြွ များသည် မြန်မာနိင်ငံအား စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်၍ တိုက်ခိုက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့ပါသည် ။ အင်ဒိုနီးရှားတောအုပ်တစ်ခုထဲတွင် အခြေပြုထားသော အဆိုပါ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှ အစ္စလာမ်စ် စစ်သွေးကြွများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂလီများအတွက် သွေးကြွေးဆပ်မည်ဟုကြွေးကြော်ကာ လက်ရှိ သင်တန်းတတ်ရောက်ထားသူ အင်အား ၃၀၀ ကျော်အနက်မှ လက်ရွှေးစင် အင်အား ၆၀ ရွေးထုတ် စေလွန်ရန် စီစဉ်ထားပါသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း စိမ့်ဝင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ရုပ်ရည်ဆင်တူသူ ၊
မြန်မာပြည်ဒေသ အားကျွမ်းကျင်သူများအား အထူးရွှေးချယ်ကာစေလွတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။၄င်းတို့နှင့်အတူ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်များ ဗုံးသီးများနှင့် ဖောက်ခွဲရေးကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ TIME မဂ္ဂဇင်းမှလည်း ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှူ ဦးဆောင်သူ ဦးဝီရသူအား အကြမ်းဖက်သမားဟုဆိုကာ မျက်နှာဖုံးတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည် ။ ထိုသို့ဖော်ပြပြီးနောက် အင်ဒိုနီးရှားအခြေစိုက် အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စိမ့်ဝင် ကာ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်ရန်အတွက် မီးစိမ်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာအတွင်း ပျံနှံခဲ့ပါသည် ။
၄င်းတို့အနေဖြင့် ရခိုင် နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရှိ ဘင်္ဂလီသောင်းကျန်းသူများနှင့် ဆက်သွယ်မည်ဟု တစ်စွန်း တစ သိရှိရပါသည် ။၄င်းတို့အဖွဲ့အား ရိုဟင်ဂျာ-မူဂျာဟစ်ဒင် စစ်သည်တော်များဟု အမည်ပေး ထားပါ သည် ။လွန်ခဲ့သော လများကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ရခိုင်ဒေသနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဒေသများ သို့ အကြောင်းတစ်စုံတရာမရှိပဲ သံချပ်ကာကားများနှင့်တာတိုပစ်အမြောက်တပ်များပါဝင်သော နယ်ခြားစောင့် တပ်များဖြင့် အင်အားတိုးထားပါသည် ။
From: (မောင်ကျောက်ခဲ အဖွဲ့)
ဒီသီတင်းပတ်ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ မျက်နှာကို ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်သူတစ်ဦး အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်တာဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေး သလိုဖြစ်စေမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက မတူကွဲပြားတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဆောင်း ပါးရေးသား ဖော်ပြမှုတွေကြောင့် အုပ်စုမတူသူတွေ ကြား အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူအချို့ရဲ့ သဘောထားတုန့်ပြန်ချက်တွေကို မဆုမွန်က စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ သြဇာကြီးမားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ရန်လိုအကြမ်းဖက်တယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြချက်ဟာ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး တခုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာ ထိပါးစော်ကားသလိုဖြစ်စေတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ ဝမ်းနည်းမိပြီးတော့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုလူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် အုပ်ချုပ်သူကနေ စ ပြည်သူအထိ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံ ပြောဆိုသင့်တယ်လို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။
“ဒီလိုဖော်ပြခံရတဲ့အတွက် ကျနော်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သတင်းမှာ ဖော်ပြချက်အရကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တခုလုံးကို စော်ကား လိုက်သလိုပဲ ကျနော် အဲ့သလို ခံစားရတယ်။ ဆိုတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြောင့်၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတခုက နစ်နာရတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတစ်ခုက အဝေဖန်ခံရတယ် ဆိုတဲ့ဟာက တော်တော် စိတ်မချမ်းသာစရာပါ။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်လို့မရအောင် ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ အကုန်လုံးပေါ့နော်။ အကုန်လုံး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကအစ နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ လူကြီးတွေကအစ အကုန်လုံးက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်စေတဲ့ စကားတွေကို မပြောပဲနဲ့၊ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပဲ တင်ပြပြောဆိုဆွေးနွေးလို့ရှိရင်၊ ကျနော်တို့ မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေ နည်း သွားနိုင်ပါတယ်။ အခုလို ကမ္ဘာ့နံမည်ကြီး ဘာသာတခုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါမျိုးရေးထားသည် Time မဂ္ဂဇင်းတခုပေါ်မှာ ဖော်ပြခံရတာဟာ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက် နစ်နာမှု၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်း ဆိုင်ရာလည်း ထိခိုက်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။”
Time မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးပါ ပုံစာရေးသားချက် နောက် သတင်းခေါင်းစဉ်ဖော်ပြချက်ဟာ ပြင်းထန်လွန်းပြီးတော့ လတ်တလော ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခြေအနေတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ဆိုးဝါးသွားစေနိုင်တယ်လို့ ဘလော့ခ်ကာ နေဘုန်းလတ်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ဆောင်းပါးမှာ ခေါင်းစဉ်ကလည်း နည်းနည်းပြင်းထန်တယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဦးတည်ချက် လွဲသွားနိုင်တယ်။ ဦးဝီရသူပုံကို သုံးထားတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကလည်း The Face of Buddhist Terror ဆိုပြီး တပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒီ့အနေအထားတခုက အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာအောင်၊ အရှိန်အဟုန် ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာအောင် သူက သွေးထိုးတဲ့ပုံစံမျိုး အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဖြန်ဖြေတဲ့ သဘောတရားတွေပဲ ရေးသင့်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့လိုမျိုး တဘက်သတ် ရေးတဲ့အခါကျတော့ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အပေါ်မှာ သေးငယ်သွားအောင်၊ ငြိမ်သွားအောင် လုပ်တဲ့ဟာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ ပိုပြီးတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးက ပိုပြီးတော့ ကြီးထွားလာနိုင်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးကြောင့်လေ။ Time အနေနဲ့ကလည်း ဒီကိစ္စကို ဖွတဲ့သဘောပေါ့လေ။ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ခက်တာက Buddhist ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးထားတဲ့အခါကျတော့ ဦးဝီရသူကို တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ အားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်တဲ့သဘောမျိုးတွေ မြင်လာပြီးတော့ တုန့်ပြန်မှုတွေကလည်း ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ လက်ရှိဖြစ်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်က ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာနိုင်တာပေါ့။”
ဒီသတင်းဆောင်းပါးကို ရေးသားသူအနေနဲ့လည်း ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကြောင့် ဘယ်လိုမျိုး အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေဖြစ် သွားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်နဲ့ သတင်းသမား ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ ရေးသားသင့်တယ်လို့လည်း ကိုနေဘုန်းလတ်က ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။
တဆက်တည်းပါပဲ မန္တလေးတိုင်း မုံရွာမြို့က ဒေသခံသတင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုတိုးကြီးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ဒေသတချို့ မှာ မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလိုမျိုး နိုင်ငံတကာ သတင်း စာနယ်ဇင်းတွေရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်ဟာ မီးလောင်ရာ လေပင့်သလိုမျိုး ပဋိပက္ခတွေ ကို ပိုတွန်းအားပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။
“မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာ Crusade တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ Time မဂ္ဂဇင်းက ဒါကို အောက်ဆီဂျင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်။ မီးလောင်ရာ လေပင့်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ ။ အဲ့တော့ ဒါတွေဟာ မလိုလားအပ်ပါဘူး။ တကယ်ပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ ဝိုင်းဝန်းပြီး စိတ်ရင်းစေတနာအမှန်နဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီလိုပုံစံတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။”
ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ် ဘာသာမဆို အစွန်းရောက်သွားရင် အကျိုးရလာဒ် မကောင်းနိုင်သလို မိမိလုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းအောင် စွမ်းဆောင်ဖို့နိုင်ဖို့ကလည်း အဓိကကျတယ်လို့လည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း ရန်ကုန်ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူက တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ဒါကတော့ ကိုယ်ကောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်လို ဘာရေးရေးပေါ့၊ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကိုယ်ကောင်းနေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်တွေ၊ ကိုယ်နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ကောင်းနေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ ကောင်းကောင်းမနေပဲ အစွန်းရောက် လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ နံမည်ကတော့ ပျက်သထက် ပျက်မှာပဲ။ ဒါဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တာက အစွန်းရောက်တယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူး။”
ဒီသတင်းဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်တွေကြောင့် နိုင်ငံတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာကြတဲ့ ဘာသာမတူသူတွေကြား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဆက်မဖြစ်စေချင်တော့ဘူးလို့လည်း မန္တလေးဒေသခံ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုလှိုင်ဘွားက ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖန်တီးပေးနေသူတွေကိုလည်း လုပ်ရပ်တွေကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်လို့သူက ပြောပါတယ်။
“ဒီမှာမိထ္ထီလာမှာဖြစ်တယ်။ လားရှိုးမှာဖြစ်တယ်။ ဥက္ကံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာက မပြေးသော်ကန်ရာရှိပေါ့ဗျာ။ နောက်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ အဓိကကတော့ ရောင်တော်ပြန်လွှတ်ပြီး အစိုးရက ဖန်တီးပေးနေတယ်လို့လည်း ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ ကျနော်ကတော့ မယုံကြည်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ နောက်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိတာပေါ့လေ။ အဲ့တာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတော့ အသုံးချခံနေရတာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။ မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ပြည်တွင်းမှာနေတာ မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးက ဒီနိုင်ငံသားတွေချည်းပါပဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီဟာကို စီမံကိန်းချပြီး လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဆက်ပြီးတော့ မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားလုံးက အတူမွေး၊ အတူကြီးပြင်းပြီးတော့ အတူလက်တွဲပြီးတော့ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။”
ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူသူတွေ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင် လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေနိုင်ရေးနဲ့ မတူညီမှုတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်း ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ကိုကျော်ကိုကိုကပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့သမဂ္ဂရဲ့ မူက ငြိမ်းချမ်းရေးကို သွားတာဗျ။ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူတွေ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေမှာ တဖက်နဲ့တဖက် ပဋိပက္ခဖြစ်မှာကို ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး။ တဖက်နဲ့တဖက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာကို ကျနော်တို့ လုံးဝမလိုလားဘူး။ အဲ့သလို အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူပဲရှိနေရှိနေ ဒီဟာကို ကျနော်တို့ လုံးဝဆန့်ကျင်ရမယ်။ ဒါကိုလုံးဝကန့်ကွက်ရမယ်၊ ရှုံ့ချရမယ်။ကျနော်တို့က ပြဿနာဖန်တီးမှုတွေကို လုံးဝ လက်မခံပဲနဲ့၊ ကျောင်းသားထု အချင်းချင်း ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းရော၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ အလေ့အထရတဲ့အထိကို ကျနော်တို့ကကြိုးစားပြီးတော့ ကျနော်တို့က လိုက်ပြီးတော့ စည်းရုံးရမှာပဲ။
Time `မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့ မြန်မာသံဃာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဝီရသူရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြပြီး အကြမ်းဖက်မှုကို လိုလားသူ အဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပေါ် အစွန်းရောက် ရန်လို တိုက်ခိုက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ သတင်းခေါင်းစီးပေး ရေးသားဖော်ပြချက် အပေါ် နိုင်ငံရေးသမား ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ အမြင်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
TIME မဂ္ဂဇင်း ရေးသားချက် ပြည်ပရောက် ဘုန်းတော်ကြီး တချို့ပယ်ချ
အခုတပတ်ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်းနဲ့ နယူးယောက်ခ်တိုင်းမ်သတင်းစာတို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တချို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် ဝေဖန်ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပမှာ သီတင်း သုံးနေ ကြတဲ့ သံဃာတော်တချို့က ဒီရေးသားမှုတွေဟာ မှန်ကန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ပြန်လည်ချေ ပလိုက်ကြ ပါတယ်။ ဒီတပတ်ထုတ် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှာ “ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာစာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အဓိက အားဖြင့်တော့ အရှင်ဝီရသူကို အိုစမာဘင်လာဒင်နဲ့တင်စားပြီး သွေးထွက်သံယိုမှုကို လှုံ့ဆော် သူအဖြစ် ဝေဖန်ရေးသားထားသလို The New York Times သတင်းစာထဲမှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာ သာတွေ အကြား အစွန်းရောက်ဝါဒ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဆိုတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ရေး သားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရေးသား ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရန်တိုမြို့က ဆရာတော် ဦးကောဝိဒက အခုလို တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း တိုးချဲ့ရေး တင်ဒါ ဟွာဝေး (huawei )ကုမ္ပဏီ ရရှိ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း MPT ကနေ မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း တိုးချဲ့ဖို့ရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ တရုတ် နိုင်ငံက ဝှာဝေး ကုမ္ပဏီ ကို ရွေးချယ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရေး အတွက် MPT ရဲ့ တင်ဒါ ကို လျှောက်ထား ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြား တယ်လီဖုန်း ကုမ္ပတွေထဲမှာ Errison Nokia နဲ့ ZTE တို့လည်း ပါဝင်တဲ့ အထဲကမှ ဟွာဝေးကို ရွေးချယ်လိုက် တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
MPT ဟာ ရှေ့မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာတော့ အစိုးရ ကနေ ဘတ်ဂျက် ချပေးမှုနဲ့ ဝန်ကြီး
ဌာနအောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင် ကော်ပိုရေးရှင်း တခု အနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေပြီး အဲဒီက တဆင့်ကနေ ပုဂ္ဂလိက ပိုင် ကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်လာဖို့ကို ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ MPT က အရာရှိတဦး ကနေ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာလူငယ်များ အဓိက ကြုံနေရသည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးမှု ပြဿနာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
လက်ရှိကာလ၌ မြန်မာလူငယ်များ အဓိက ကြုံတွေ့နေရသည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးမှု ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြေညာချက် တစ်ရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်များ အစည်းအရုံးမှ ဇွန် ၂၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် အလုပ်လက်မဲ့ပေါင်း ၇၃ သန်းခန့် ရှိနေရာ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ မှာ ၃၅ နှစ်အောက်ရှိသော လူငယ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုရာခိုင်နှုန်း ၆၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်များလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လူငယ်အလုပ် လက်မဲ့နှုန်းမှာ အမြင့်ဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီး အလျင်အမြန် ဖြေရှင်းရမည့် ကိစ္စရပ် တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် လွှတ်တော်အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အနာဂတ် တိုင်းပြည်၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာမည့် လူငယ်များ၏ ဘ၀ရေရှည် အာမခံချက် ရရှိရေး အတွက် မိမိတို့ တတ်မြောက်ထားသည့် ပညာနှင့် ကိုက်ညီသော အလုပ်များ ရရှိရေး၊ ၀င်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကာ လုပ်ငန်းအခြေစိုက်သည့် နေရာဒေ သတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းမှု၊ အခွန်ပေးဆောင်မှုတို့အပြင် အရေး ကြီး ကိစ္စရပ်တစ်ခု အနေဖြင့် ဒေသခံ လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရေးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ကော်မရှင်မှ တိုက်တွန်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရေးတို့ကို နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေ ခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၁ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော နိုင်ငံတော်သည် ပြည်သူများ အလုပ်လက်မဲ့ နည်းပါးစေရန် တတ်နိုင် သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ရမည် ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် လျော်ညီစွာ အနာဂတ် မြန်မာ့ လူငယ်များ အတွက် ခိုင်မာသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် အမြန်ဆုံး အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့် အချက်များ ပါဝင်ကာ ကြေညာ ချက်တွင် ကြေညာချက်ငါးခု ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကျပ် ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းများဖြင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ မရနိုင်
မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းကတ်များဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံ များသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ကျပ် ၅၀ ဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း ခေါ်ဆို၍ ရသည်ဆိုသည့် သတင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း ခေါ်ဆို၍လည်း မရနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်း အုပ် ဦးကျော်စိုးက ဆိုသည်။
ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဦးကျော်စိုးက "ဒီကျပ် ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေ ကို ဖုန်းခေါ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အရင်ချပေး ထားတဲ့ ကျပ် ၁၅ သိန်းတန် ဖုန်းတွေတောင် မရတာ သူတို့ ဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့ လုပ်လဲဆိုတာတော့ ဆရာ လည်း မပြောတတ်တော့ဘူး။ ခေါ်လို့ မရတာတော့ အမှန်ပဲ တကယ်လို့သာ ခေါ်လို့ရရင် အခုလောက် ဆို မလွယ်တော့ဘူး။ လူတိုင်းနီးပါးလောက်မှာ ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းတွေ ရှိတာပဲ ရတယ်မရ ဘူးဆိုတာ စမ်းကြည့်လို့ရတယ်" ဟု ဆိုသည်။
ဒီကျပ် ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ဖုန်းခေါ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အရင်ချပေးထားတဲ့ ကျပ် ၁၅ သိန်းတန် ဖုန်းတွေတောင် မရတာ သူတို့ ဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့ လုပ်လဲဆိုတာတော့ ဆရာလည်း မပြောတတ်တော့ဘူး . . . . .
အပြင်တွင် ကျပ် ၁၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဟု သတင်းများ ထွက်နေကြောင်း ကျပ် ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းများကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် စတင်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး တစ်လလျှင် ဆင်းကတ်အရေအတွက် ၃၅၀၀၀ ရောင်းချပေးကြောင်း သိရသည်။
Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဖော်ပြချက် ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် ကန့်ကွက်
Time ရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခရီးလမ်းအတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ပဋိပက္ခကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်တယ်" - ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် CEO (Eleven Media Group).
From : .. ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် CEO (Eleven Media Group).
ဒီတစ်သက် ဘယ်တော့မှ မလေးကို ပြန်မသွားတော့ဘူးဟု မလေး...
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားမှ အစ္စလာမ်စစ်စစ်ေ...
TIME မဂ္ဂဇင်း ရေးသားချက် ပြည်ပရောက် ဘုန်းတော်ကြီး တ...
မြန်မာ မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း တိုးချဲ့ရေး တင်ဒါ ဟွာေ...
မြန်မာလူငယ်များ အဓိက ကြုံနေရသည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့...
ကျပ် ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းများဖြင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများသို့...
Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဖော်ပြချက် ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် က...